शुद्धाशुद्धि सम्बन्धि जानकारी - Linux Localization Guidelines
शुद्धाशुद्धि सम्बन्धि जानकारी
तपाईंले उबुन्टुलाई नेपालीमा समायोजन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईं-हामीजस्तै नेपाली प्रयोगकर्ताले, तपाईंको परिवार र साथीभाइले, आफ्नै भाषामा सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकून् भन्ने हो । उबुन्टु धेरैखाले व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्छन्, जस्तै सरकारी कर्मचारी, गाउँ गाउँका विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी, पसले, पत्रकार, लेखक, आदि । तसर्थ, सकेसम्म बुझिने गरि सरल भाषामा शुद्ध तरिकाले समायोजन गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो । समायोजन जति राम्रो भयो त्यति नै प्रयोगकर्तालाई सजिलो हुने भएकाले निम्नानुसारका नियमहरू सबैले पालना गरिदिनुहोस् । यसो गर्दा तपाईँले गर्नुभएको अनुवाद प्रयोगकर्ताले राम्रोसँग बुझ्न सक्छन् ।
पूर्णविराम चिह्न यो हो - "।" जुन रोमन युनिकोड किबोर्डमा अङ्ग्रेजीको fullstop थिचेर टाइप गर्न सकिन्छ ।
पूर्णविरामको सट्टा पाइप क्यारेक्टर - "|" वा अङ्ग्रेजीको सानो L वा ठुलो i प्रयोग गर्नु गलत हो ।
पूर्णविरामको अगाडि एउटा खाली स्पेस छोड्नुपर्छ । जस्तै: "बन्द गर्नुहोस्।" गलत हो । सही तरिका "बन्द गर्नुहोस् ।" हो ।
प्राय प्रयोग हुने शब्दहरू
तपाईं : तपाईं शब्द यसरी बन्छ: त ‌+ पा + ई + ं । गलत प्रयोगहरू: तपाई, तपाइँ, तपाँइ, तपाइं ।
शुद्ध लेख्ने तरिका: तपाईंलाई कुनै शब्दमा प्रयोग हुने इकार-उकारहरूको सही प्रयोग थाहा छैन भने कृपया एकपटक शब्दकोश पल्टाएर वा अनलाइन सर्च गरेर पक्का गर्नुहोस् । ह्रस्व-दीर्घसम्बन्धि नेपालीका साधारण नियमहरू छन्, जसको पालना गरेमा भाषामा निकै राम्रो सुधार हुन्छ । यी लिङ्कहरू क्लिक गरेर ती नियमहरू एकपटक हेर्नुहोस् । १: सामान्य नियमहरू, २: संक्षिप्‍त नेपाली शुद्धाशुद्धि ज्ञान ।
छिटो गर्ने तरिका: "Someone should review this translation" लेखेको बाकसलाई Tick लगाएर छोड्नुभयो भने पछि अरु अनुवादकहरूले तपाईंले गर्नुभएको गल्ती सच्याउन सक्छन् ।
शब्दहरू जोड्ने वा नजोड्ने ? हिन्दी र नेपालीमा एउटा महत्वपूर्ण फरक छ; हिन्दीमा छुट्टएर लेखिने धेरै शब्दहरू नेपालीमा जोडेर लेखिन्छन् !
-ले, -हरूले, -लाई, हरूलाई, -को, -की, -का, -हरूको/की/का, द्वारा, हरूद्वारा, आदि जोड्ने ।
पनि, चाहिँ गर्दा, गर्ने, गर्छ, आदि नजोड्ने ।
-अगाडि, -पछाडि, -पछि, -अघि, -सँग, -सित, -नेर, -तिर, -वर, -पर, -भित्र, -बाहिर, माथि, तल, आदिलाई जो्डने ।
अर्धविराम (Comma)को प्रयोग:
वाक्यांश छुट्याउँदा धेरै प्रयोग नगर्ने: अङ्ग्रजीमा "If you want xyz, do abc" छ भने "यदि तपाईं xyz चाहनुहुन्छ भने abc गर्नुहोस्" लेख्ने हो । अर्धविराम आवश्यक छैन ।
लामो वाक्यलाई बुझ्ने बनाउन प्रयोग गर्ने: यदि कुनै वाक्य धेरै लामो छ भने, अथवा दुईभन्दा धेरै वाक्यांश छन् भने यो वाक्यमा प्रयोग भएजस्तै गरि अर्धविराम प्रयोग गरेर पढ्न सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ ।
काल (Tense) र सन्दर्भ (Context) मिलाउने:
अङ्ग्रेजी वाक्य जुन कालमा लेखिएको छ, त्यही कालमा अनुवाद गर्नुपर्छ । साथै, अनुवाद गरिसकेपछि एकपटक अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवैको अर्थ एउटै छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ अनुसार एउटै वाक्य वा वाक्यांशको फरक फरक अर्थ आउन सक्छ, तसर्थ अहिले अनुवाद गरिरहेको वाक्यको अगाडि वा पछाडि कस्ता वाक्यहरू छन् भनेर विचार गरेर सोहिअनुसारको अनुवाद गर्नुपर्छ । जस्तै "Messaging" शब्दको अर्थ "सन्देश पठाउँदै..." हुन्छ तर त्यही शब्द एउटा Appको नामको रूपमा प्रयोग भएको हुन सक्छ, जुन बेला "सन्देश" मात्र हुन्छ ।
बटनमा र अन्य ठाउँमा प्रयोग हुँदा फरक तरिकाले अनुवाद गर्नुपर्छ । जस्तै "Go back" भन्ने बटनमा "पछाडि जाने" ठीक हुन्छ भने "You can go back to the previous menu" भन्ने सन्देश छ भने "पछाडिको मेनुमा फर्कन सक्नुहुन्छ" हुन्छ ।
शब्द-शब्द उल्था मात्र नगरि वाक्यको अर्थ बुझाउने:
अनुवाद गर्दा वाक्यको शब्द शब्दको उल्था लेख्ने होइन । अङ्ग्रेजी वाक्यमा प्रयोग भएका सबै शब्द नेपाली वाक्यमा पनि हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन । सरल भाषामा अर्थ बुझ्ने गरि अनुवाद गर्ने हो ।
प्राय नेपाली उबुन्टु प्रयोगकर्ताहरूले पहिले नै अन्य प्रणालीहरू र मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने गरेको हुनाले साधारण अङ्ग्रेजी शब्दहरू जस्तै: app, save, number, hard disk, screen, computer, आदि शब्दहरू बुझ्छन् । तीनलाई "अनुप्रयोग, वचत गर्ने, अङ्क, साह्रो भाँडो, पर्दा, सुशाङ्क" लगायतका बुझ्दै नबुझिने र उस्तै परे अनर्थ लाग्ने गरि उल्था नगर्नुहोस् ।
Google Translate / अनुवाद जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्दा छिटो र सजिलो हुन्छ, तर तीमार्फत गरिएका अनुवाद प्राय शब्द‍-शब्दको उल्था वा हिन्दी भाषाबाट प्रभावित हुने भएकाले जस्ताको तस्तै कपि‍-पेस्ट नगर्नुहोस् ।
थप जानकारीको लागि यो जानकारी एकपटक हेर्नुहोस् । यो पेजमा निरन्तर नयाँ बुँदाहरू थपिने भएकाले मौका मिलाएर हर्ने गर्नुहोस् । केहि टिप्पणी, प्रश्न वा सुझाव भए तल कमेन्ट गर्नुहोस् ।
सबैको लागि लिनक्स आयोजना